MYUTSAWMYIT : ကချင်ပြည်နယ်သတင်း: နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ စတင်ရန် အစိုးရအား UNFC အကြောင်းကြား
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ စတင်ရန် အစိုးရအား UNFC အကြောင်းကြား
စည်းလုံး ညီညွတ်သော တိုင်းရင်းသား လူမျိုးများဖက်ဒရယ် ကောင်စီ (UNFC) သည် အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးအရ ဆွေးနွေးရန် အဆင်သင့် ဖြစ်နေပြီး ဖြစ်ကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ရက်ပိုင်းက အကြောင်းကြား ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်ဟုပြောရေး ဆိုခွင့်ရှိသူ ပဒို ဒေးဗစ်တာကပေါက ဆိုပါသည်။
အစိုးရ ပြည်ထောင်စု အဆင့် ငြိမ်းချမ်းရေး ဖေါ်ဆောင်ရေး ကော်မီတီကလည်း တွေ့ဆုံမည်ဟု အကြောင်းပြန်ကြား ခဲ့သော်လည်းနေ့ရက်နှင့် နေရာကိုမူမသတ်မှတ် နိုင်သေးကြောင်းမြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေး စင်တာမှဒေါက်တာ ဇော်ဦးက ဆိုပါသည်။
UNFC သည်အစိုးရနှင့်နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲမကျင်းပမှီနှစ်ဖက် ယုံကြည်မှု တည်ဆောက်နိုင်ရန်လိုလားနေသည်ဟုဆိုပါသည်။ဤသို့ကြောင့်ဆွေးနွေးပွဲ အကြိုညှိနှိုင်းပွဲကို KNU အတွင်းရေးမှူး (၂) ဖြစ်သူ ပဒိုမန်းမန်းဦးဆောင်သောအဖွဲ့အားဖွဲ့စည်းထားပြီးဖြစ်ပါသည်။အကြို ညှိနှိုင်းပွဲကိုလည်း UNFC နှင့်အစိုးရတို့၏လာမည့် ဆွေးနွေးပွဲအတွက်ချမှတ်ထားသင့်သောမူဘောင် သတ်မှတ်ရေး ကိစ္စကိုညှိနှိုင်းမည်ဖြစ်သည်။
UNFC သည် KIO နှင့် အစိုးရတို့တွေ့ဆုံ ဆွေးနွေးကြပြီးမှအစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးအရဆွေးနွေးရန်ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့ပါသည်။ဤသို့ကြောင့် KIO နှင့် အစိုးရတို့မေလ (၂၉) ရက်နေ့တွေ့ဆုံပြီးနောက်ပိုင်းအစိုးရနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရန်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်။
UNFC သည်အစိုးရနှင့်ဆွေးနွေးရမည့်မူဘောင်ကိုလည်းသတ်မှတ်ထားပြီးဖြစ်သည့်အတွက်မဆွေးနွေးမှီအစိုးရကိုယ်စားလှယ်များနှင့်ယုံကြည်မှု တည်ဆောက် လိုကြခြင်းဖြစ်ပါသည်။
at 6/13/2013 05:45:00 PM
မြန်မာ့တပ်မတော်၏ ကချင်ပြည်နယ်ထိုးစစ်အတွင်း ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု များစာရင်းဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာ ၁၅ ရက်မှ ၂၀၁၃ ခုနှစ် ဇန်န၀ါရီ ၁၅ ရက်နေ့ အထိဖြစ်သည်။ ထိုးစစ်ဆင် သုံးစွဲမှု အင်အားမှာ- မပခ လက်အောက်ခံ တပ်ရင်းများ၊...
ဘာဖြစ်ပြန်ပြီလဲ ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် တစ်ထောင့် တစ်နေရာ
(Mizzima) ကိုမျိုးသန့်ရေ ကျွန်တော် ပြီးခဲ့တဲ့ ဇန်နဝါရီ ၂၂ ရက် က ရန်ကုန် ပတ်ခ်ရွိုင်ရယ် ဟိုတယ်မှာ Internews Myanmar အဖွဲ့ရဲ့ &#...
အစိုးရရဲ့ တနိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ် ရပ်စဲရေး တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မလား
(Irrawaddy) တနိုင်ငံလုံး အတိုင်းအတာနဲ့ အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲကို အစိုးရက ဦးဆောင်ပြီး လာမယ့် အောက်တိုဘာ လ မှာကျင်းပဖို့ ပြောဆ...
HPAI KAWNG MARE HTA MHH NI HTIM GASAT
(Jinghpawkasa) Wunpawng Mungdan Shanglawt Asuya, Sam Mung daju Dap Ba (4) up hkang ginra rai nga ai Hpai Kawng Mare hte myen hpyen as...
(ကချင်သတင်းဌာန) နိုင်ငံတော် အစိုးရနှင့် ကချင်လက် နက်ကိုင်များကြား တင်းမာနေသော စစ်ရေး ပဋိပက္ခ အခြေအနေ သည် အရှိန်လျှော့သဖွယ် ရှိသော်လည်း ...
▼ June9- June 16 (51)
မြစ်ဆုံ အနီးတစ်ဝိုက် ပြည်သူ့စစ်များမှ မြေယာများ သိ...
SLG. ZAHKUNG LUM AWNG HPE MYEN NI GAP SAT
ကချင် ဒုက္ခသည်စခန်းဆီ အကူအညီ သွားပေးခွင့်ရတာ ကုလကျေနပ်
မုန်းဂိုးဒေသတွင် အစိုးရတပ်နှင့် KIA တပ်ပွဲဖြစ်
K.I.O Ginjaw Komiti Salang Ni Hpe Laiza Buga Hpung...
KIO နယ်မြေတွင်း ဒုက္ခသည်များအတွက် ကုလ ကူညီမှုများ ဒု...
ဈေးမပြောင်းရရေး အလုပ်လက်မဲ့ ပျံကျဈေးသည်များ ဆန္ဒဖော...
သမ္မတ သက်တမ်းအကုန် မြစ်ဆုံပြန်စရန် တရုတ်ကြိုးပမ်းနေ
စစ်ပွဲ ၂ နှစ်တာကာလ ကချင်ဒုက္ခသည် ကလေး ၄၀,၀၀၀ ကျော်၏...
အစိုးရနှင့် KIO တို့ကြား ငြိမ်းချမ်းရေး ဖော်ဆောင်ရ...
တိုင်းရင်းသား အားလုံးအရေးကို ပါ ဆွေးနွေးသွားမယ်လို...
နိုင်ငံရေး ဆွေးနွေးပွဲ စတင်ရန် အစိုးရအား UNFC အကြေ...
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်း နိုင်ငံခြား ကုမ္ပဏီများနှင့် ပူး...
SHANGLAWT MASA GAT HKAI HPUNG NI A SHAMU SHAMAWT LAM
ကချင်ပြည်သူ လူထု၏ လိုလားချက်များနှင့် အကြံဥာဏ်များ...
ဖားကန့်တွင် တနိုင်တပိုင် ကျောက်တူးသူ ၂၀၀ ကျော် အဖမ...
ကချင်စစ်ဘေး ဒုက္ခသည်များကို ထောက်ပံ့ရန် တနှစ်လုံးအတ...
KIA နှင့် အစိုးရ တပ်တို့ကြား အောက်ခြေ ထိတွေ့ တိုက်...
အစိုးရနှင့် နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မူဘောင် ညှိနှိုင်...
မြန်မာတွေ ဘာလို့ ဆင်းရဲသလဲ?
KIA Mung Shawa Hpyen Hpung (M.H.H) Hte Myen Asuya ...
မြန်မာအစိုးရတပ်နှင့် KIA ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတွင်...
ကချင်စစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့် ဆုတောင်းပွဲ ချင်းမိုင်မြို...
ကချင်ပြည်နယ် ဧရာဝတီ မြစ်ရိုးတစ်လျှောက် ရှမ်းရွာမျာ...
'ဝ' ဒေသရှိ စိုက်ခင်းများ ဘိန်းခင်းဟု စွပ်စွဲမှု စား...
စစ်ဒဏ်ကို ကချင်ပြည်သူလူထုက ဆက်ပြီး မခံစားနိုင်တော့ဘူး
ကချင် ရေခဲတောင်ပေါ်သို့ ဦးတေဇ ဒုတိယအကြိမ် ထပ်မံကြိ...
ကချင် စစ်ပွဲတွင်း ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ဆုံးရှုံးသွားသူများအ...
Lahta Sam Mung KIA Masat (36)Dap Dung Ginra, Namhk...
AWMDAWM SHANGLAWT ASAK
" ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်ရောင်နီလင်းတော့မယ့်လို့ တစ်ကယ...
ကချင်ဒုက္ခသည်စခန်းများမှ ကျောင်းနေအရွယ် ကလေးငယ်များ...
ကချင်စစ်ပွဲ နှစ်နှစ်ပြည့်တွင် အရပ်ဘက် လူမှုအဖွဲ့အစည...
Hopes Behind The War မှတ်တမ်းရုပ်ရှင်
မြစ်ဆုံစီမံကိန်းရပ်ဖို့ တရုတ်ကုမ္ပဏီကို ၈၈ တိုက်တွန်း
ကချင်ပြည်နယ်ဒေသ တစ်ကျော့ပြန်စစ် ၂ နှစ်ပြည့်တွင် ကခ...
ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက် ကချင်ဒုက္ခသည်တွေ ဆုတောင်း
ကချင်စစ်ပွဲသေဆုံးခဲ့ရသူတွေအတွက် ရန်ကုန်မှာ လမ်းလှေ...
MAJAN (2) NING HPRING KYU HPYI HPAWNG YANGON KAW G...
HTARA HKA, KASHUN RAI HKRAI NOI HPAW POI
ကချင် စစ်ပွဲ ၂ နှစ်ပြည့်ပြီ။
လူ့အခွင့်အရေး နဲ့ နိုင်ငံ့တိုးတက်မှု ဆက်စပ်ခြင်း။
Laissez-faire Economic နဲ့ တို့နိုင်ငံရဲ့ အနေအထား
ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ ပြည် နယ်တောင်းဆိုမှုနှင့်...